Dhacsanaanta Cadaadiska Dhiigga (Hypotention). | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Wadanaha waxa uu dhiigga siiyaa guud ahaan unugayada jirka, sidoo kalena jirka waxa uu dhiigga ku soo celiyaa wadnaha si uu u isticmaalo, waxaana lagu kala magacabaa: dhiigga uu jirka siiyo wadnaha: Dhiigga kore (systolic) halka dhiigga jirka kasoo laabto loo yaqaano: Dhiigga hoose ( Diasytolic),cabir ahaan waxaa loogu talagalay labbada dhiigg in ay noqdaan 120/80mmHg.Cabirka cadaadiska dhiigga marka uu ka hoos maro 90/60 mmHg waxaa looyaqaanaa dhacsanaanta cadaadiska dhiigga.
Haddaba Ina mari Aan Isla Ogaanee Wax-yaalaha Sababo Dhacsanaanta Cadaadiska Dhiigga:
Uurka ayaa kamid ah wax-yaalaha sababo hoos u dhaca cadaadiska dhiigga, taasoo oo ay keeneyso baahida jirka oo aad u badan.
Dhiigga bax badan oo imaado xilliga qalliinka lagu guda jira waxa ay sababta hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Cudurada wadnaha ku dhaca waxa ay sababaan hoos u dhaca cadaadiska dhiiga.
Cudurka Macanka ,iyo cudurada ku dhaca qanjirada waxa ay kamid yihiin cudurada keena hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Infekshanka qaar waxa ay keenaan hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Daawooyinka qaar waxa ay sababan hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Qofka oo fuuq baxo waxa ay sababtaa hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Qofka oo nafaqo daro ku dhacdo jirkiisa waxa ay sababtaa hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Calaamadaha Lagu Garto Hoos Udhac Cadaadiska Dhiigga Waxaa Kamid Ah:
Cabirka dhiigga oo ka yar 90/60 mmHg.
Wareer iyo lallabo.
Ogaalka oo hoos u dhac ku imaado.
Qabow maqaarka ah.
Yaa Halis Ugu Jira In Uu Ku Imaado Hoos U Dhaca Cadaadiska Dhiigga?.
-Da’ahaan qofka ka weeyn 65 sano.
-Cudurada qaar waxa ay halis u yihiin in ay kenaan hoos u dhaca cadaadiska dhiigga
Qofka aanan cabin biyo badan waxa uu halis ugu jiraa in uu hoos u dhaca ku imaadaa cadaadiska dhiigga.
Dadka shaqada badan qabto cunistoodana ay yartahay waxa ay halis ugu jiraan hoos u dhaca cadaadiska dhiigga.
Sidee Loo Daaweeyaa Hoos U Dhaca Cadaadiska Dhiigga:
Cunista badan ee cusbada ayaa ah qeeyb kamid ah daawada hoos u dhaca cadaadidka dhiigga.
-Cabista biyo badan ayaa ah qeeyb kamid ah daawada hoos u dhaca cadaadiska
– Qofka oo laga daaweeyo infekshanka keenay hoos u dhaca cadadiska dhiigga.
Tags: Dhacsanaanta Cadaadiska Dhiigga (Hypotention).
Next post Waa Maxay Cudurka Sambabka Lo’du (CBPP)?
Previous post Daawooyinka iyo Uurka